Iyada oo laga aasaasay Varkaus sannadkii 1989, Konjunktuuri Oy waa sharikad Finnish ah oo ahmiyad dhexe u leh adeegyada tarjumadda iyo af-celinta. Shaqaalahayaga xirfadyahanka ah iyo shabakadda ballaaran ee hawlwadaagyada macnaheedu waa in aanu awoodno in aanu soo-saarno adeegyo tarjumad tayo sare leh oo leh u-jajabnaan lagu fulin karo hawlaha waqtigooda oo sax ah.
Waxaanu bartilmaameedsanaa hubinta in waayo-aragnimadayda isku-dhafan iyo aqoonta aanu u leenahay adeegyada tarjumaddu ay ka caawiso macmiishayada sharikadaha ah jawi caalami ah. Adeegyadayada waxa lagu heli karaa dhammaan luqadaha waaweyn oo ay ku jiraan kuwa Xubnaha Cusub ee Midowga Yurub iyo dalalka Aasiya.
Waxaan u tarjumnaa macmiishayada ah sharikadaha qoraalo buuxa oo kala duwan, haddii ay tahay dhokomentiyo sharci, buugyare wax la dhoofinayo, bogagga websaydyada, tilmaamaha rakibaadda iyo isticmaalka, iyo xiriirada caalamiga ah, iyo dhokomentiyada mashruuc dhan.
Waxa kale oo aan tarjumnaa dhammaan noocyada shahaadadaha iyo dhokomentiyada rasmiga ah ee macmiisha gaarka ah.
Tarjumad kasta oo naga soo baxda waxa caddayn kara tarjume shahaadad haysta taas oo ah adeeg dheeraad ah. Dhammaan tarjumaanada shahaadada haysta waxa qabanaya heshiis aanay waxba gudin karin.
Turjumaanadyada xirfadyahanka ah waxay waxtar weyn ka noqon karaan xaarladaha marka mugga af ka-hadalku aan ku ahayn mid ku filan hawsha markaas gacanta lagu hayo. Turjumaanadu waxa kale oo loo isticmaali karaa marka taageero luqad looga baahan yahay hirgelinta guusha kulan ama xaflad.
Waxaan u dirnaa turjumaandayada hawkarka ah xaflado kala nduwan, shirar iyo kulano. Waa xirfadyahano tababaran, oo ku shaqeeya cuqdad la'aan oo ku adag tiirarka asturnaanta.
Saxidda iyo dib-u-akhrinta
Adeegyada eegidda hufnaanta luqad ayaa iyana ay heli karaan macmiishaydu haddii ay rabaan. Qaladyada luqadda ee qaababka xiriirka waxay adkeeyaan fahamka oo ay horseedaan isfaham la'aan. Waxa kale oo ay akhristaha kaga tagaan aragti xun oo ay ka qaataan sharikadda. Aftahanimo, halbeeg hufan wuxu hagaajiyaa hufnaanta fariinta taas darted waxay mudan tahay fejignaan gaar ah.